Ihe onyonyo izizi sitere na ihe nkiri Killers nke Ifuru Moon by Martin Scorsese | Esi m mac
Ihe onyonyo izizi sitere na Killers nke Martin Scorsese nke Osisi Osisi Ifuru
Martin Scorsese na-esote oru ngo, Ndị ogbu nke ọnwa ifuru, ga-ebu ụzọ pụta na Apple TV +, mgbe ụlọ ọrụ Cupertino gbadoro nkwekọrịta na ụlọ ọrụ mmepụta nke Scorsese na Leonardo DiCaprio. Ozugbo emechara ihe nkiri ahụ na ọrụ ndị ọzọ, eserese amalitela na anyị nwere mbụ oyiyi.
Mgbe ihe karịrị otu afọ nke nkwadebe, akụkọ mbụ banyere ihe nkiri a bụ site na Machị 2020, anyị mechara nwee akpa ndise nke ọhụrụ nkiri Scorsese, ihe onyonyo gosiri Leonardo DiCaprio dika Ernest Burkhart na Lily Gladstone dika nwunye ya, Mollie.
# NdịOghaOfTheFlowerMoon @OnyinyeEgwuregwu https://t.co/L9gY0cmR7x pic.twitter.com/Mpmo7jB64l
- Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) Nwere ike 10, 2021
Ihe DiCaprio kesara onyonyo a site na akaụntụ Twitter ya (Via Akụkọ Osage). Lily obi ụtọ sonye n'ihe nkiri nke ihe nkiri a na February gara aga, tinyere Jesse plemons dị ka onye ọrụ FBI onye ga-eme nyocha ahụ nke ogbugbu nke ndị Osage India bara ọgaranya.
Ihe nkiri a, na mgbakwunye na onye nduzi, Scorsese bụkwa onye nrụpụta ọrụ, bụ dabere na akwụkwọ aha onye edemede bụ David Grann dere. Na mgbakwunye na Leonardo DiCaprio, ọzọ nke nnukwu kpakpando Hollywood na-apụta na ihe nkiri ọhụrụ a bụ Robert DeNiro.
Ndị ogbu nke ọnwa ifuru atọrọ na 1920, na Federal Bureau of Investigation (FBI) ọhụrụ nyochaa ogbugbu nke ndị ọgaranya Osage India ndị enyere ikike ụlọ maka mmanụ achọpụtara n’okpuru ala ha.
Ọ bụ ka oge na-aga ịmara Kedu ihe nwere ike ịbụ ụbọchị ntọhapụ nke ihe nkiri ọhụrụ aAgbanyeghị, o yikarịrị ka ọ ga-erute ma sinima na Apple TV + tupu ngwụcha afọ iji zọọ Oscars nke Academy nke Hollywood n'afọ ọzọ, na nke ga-abụ mbipụta nke 94.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ihe onyonyo izizi sitere na Killers nke Martin Scorsese nke Osisi Osisi Ifuru
Otu izu ikpe n'etiti Epic Games na Apple. Nchịkọta nke ihe na-eme
Apple na-ewepụta Onye Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Facebook Iji bulie azụmahịa ya